Wariye Axmed Maxamed Cali (Kismaayo), oo Geeriyooday – Balcad.com Teyteyleey
Wariye Axmed Maxamed Cali (Kismaayo), oo Geeriyooday
By Abdi Malik	 On Aug 9, 2017
Allaha u naxariistee waxaa saakay Isbitaal ku yaala dalka Hindiya ku geeriyooday Warie Axmed Maxamed Cali (Axmed Kismaayo) oo ahaa Wariye caan ka ahaa gayiga Soomaaliya horeyna uga soo shaqeeyay Idaacada BBC-da.
Wariyaha ayaa mudooyinkii lasoo dhaafay waxaa hayay xanuun waxaana dhawaan loo qaaday dalka Hindiya si halkasai loopgu soo daweeyo, Wariyaha ayaana saakay qadartii eebe ku timid isagoona ku geeriyooday Dalka Hindiya .
Ehelada Marxuunka ayaa Warbaahinta u xaqiijiyay in xanuunkii hayay saakay u geeriyooday, waxaana Wariye Axmed Kismaayo kahor inta aan la geyn dalka Hindiya uu ku sugnaa dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi .
Axmed Maxamed Cali (Ahmed Kismaayo) ayaa kamid ahaa Wariyaasha ugu caansanaa Soomaalia, waxa uuna sanadkii hore iska casilay gudoomiyaha Guddiga doorashooyinka Maamulka Puntland , waxa uu sidoo kale soo noqday Agaasimihii Telefishinka Puntland.
The post Wariye Axmed Maxamed Cali (Kismaayo), oo Geeriyooday appeared first on Ilwareed Online.
Baarlamaanka Soomaaliya Oo Ansixiyay Sharciga Isgaarsiinta Qaranka